အနုပညာချီတက်ပွဲ၏လမ်း - World March
ပင်မစာမျက်နှာ » NOTICIAS » စာနယ်ဇင်းမှတ်စု » အနုပညာချီတက်၏လမ်းအရောင်များ
04 / 05 / 2020 14 / 03 / 2020 အားဖြင့် အန်တိုနီယို Gancedo
World March အတွင်းမှာလုပ်ရပ်တိုင်းနီးပါးမှာအနုပညာအသုံးအနှုန်းတွေဟာသူတို့ရဲ့ထုတ်ဖော်ပြသမှုရဲ့အဓိကယာဉ်မဖြစ်ခဲ့ရင်သူတို့ကိုဖျော်ဖြေဖို့စတင်ခဲ့တယ်။
ကျနော်တို့ဆောင်းပါးထဲမှာချီတက်၏အနုပညာလှုပ်ရှားမှုများ၏ပထမ ဦး ဆုံးအကျဉ်းချုပ်လုပ် ကမ္ဘာ့မတ်လ၌အနုပညာတောက်ပ.
1 အာဖရိကမှာ၊ ဓာတ်ပုံ၊ ကပွဲနဲ့ရက်ပ်ပါ
2 ပန်းချီဆရာ Lola Saavedra နှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးပန်းချီကားများ
5 တောင်အမေရိကကိုဖြတ်သန်း။ အနုပညာသည်ဗဟိုနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်
7 ဥရောပအတွက်, Bel Canto
အာဖရိကမှာ၊ ဓာတ်ပုံ၊ ကပွဲနဲ့ရက်ပ်ပါ
ယေဘူယျအားဖြင့်၊ ဒုတိယကမ္ဘာမတ်လအာဖရိကမှ ဖြတ်၍ ဓာတ်ပုံဆရာတစ်စု ဖြစ်ရပ်အားလုံးဖုံးလွှမ်းကြ၏။ လူငယ်များ၏ရွှင်လန်းမှုနှင့်ဗဟုသုတကောင်းများကသူတို့အားအလင်းပေးသည်။
ကျန်းမာသောချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လူငယ်များ၏ကိုယ်ပိုင်အရှိန်အဟုန်အရဓာတ်ပုံဆရာလေး ဦး နှင့်ကင်မရာမင်းတစ်ယောက်သည်ဒုတိယမြောက်ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်အကြမ်းမဖက်မှုအတွက်လမ်းမပေါ်သို့လမ်းလျှောက်သွားသည်။ မော်ရိုကို.
သို့ entry ကိုအပေါ်သို့ senegalစိန့်လူးဝစ္စတွင်အောက်တိုဘာ ၂၆ ရက်မွန်းလွဲပိုင်းတွင် Don Bosco စင်တာကိုကျင်းပခဲ့သည်၊ ကမ္ဘာ့မတ်လ၏တင်ဆက်မှုတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ပြီး၊ ၎င်း၏ယဉ်ကျေးမှုအစိတ်အပိုင်းမှာ Juvep ပြဇာတ်ရုံ၏ကိုယ်စားပြုမှုပါဝင်သည်။ ကောင်းမွန်သောလေထုကိုဖန်တီးပေးသော Rapper General Kheuch နှင့် Slamero Slam Issa တို့၏ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှု။
ပန်းချီဆရာ Lola Saavedra နှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးပန်းချီကားများ
Coruñaပလတ်စတစ်အနုပညာရှင် Lola Saavedra သည်ငြိမ်းချမ်းရေး၊ အကြမ်းမဖက်ရေးနှင့်အကြမ်းမဖက်ရေး၏တန်ဖိုးများကိုဖော်ပြသည့်“ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်အကြမ်းမဖက်ရေးအတွက်ကမ္ဘာ့ဖလားမတ် ၂” တွင်သူမ၏အနုပညာနှင့်ပူးပေါင်းခဲ့သည်။
မတ်လ၏တစ်ခုလုံးကိုကာလအနုပညာဖြစ်ရပ်တစ်ခုဖွင့်လှစ်ခဲ့သည် စပိန်နိုင်ငံ၊ ကိုခေါ် ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်စိတ်ကူးယဉ်မှုအတွက်ပန်းချီများ၊ Coruña.
တစ်ချက်အနေနှင့်အစပြုခရီးကိုသွားသောလှေသည် ၀ ါး ဖြစ်၍ ထောင်နှင့်ချီသောကလေးများကပြုလုပ်ခဲ့သောငြိမ်းချမ်းရေးပန်းချီကားများကိုနမူနာယူခဲ့သည်။ ငြိမ်းချမ်းရေးအရောင်များ.
အခြားတစ်ဖက်တွင်ရောက်ရှိလာသည့်ဆိပ်ကမ်းများ၌၎င်းတို့သည်အတူတူအနုပညာနှင့်အတူမတူညီသောဖြစ်ရပ်များတွင်ပါ ၀ င်နေကြသည်။
ထို့ကြောင့်, Marseille ၌တည်၏ သလာစတန်: ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်သီချင်းဆိုခြင်း၊ အတူတကွသီဆိုခြင်း၊ အသံများကိုစုစည်းနိုင်ခြင်း သူတစ်ပါး၏အတွေ့အကြုံများကိုကျွန်ုပ်တို့သီဆို၊ ပြောဆို၊ နားထောင်ကြသည်။ အဲဒီမှာငါတို့ရှိသမျှသည်သီချင်းဆိုပါဝင်ဆောင်ရွက် 31 2020 အောက်တိုဘာလ.
ဘာစီလိုနာတွင်ဟီရိုရှီးမားနှင့်နာဂစ်ဆာကေးမှလွတ်မြောက်လာသူများသည်ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်နျူကလီးယားဗုံးများကိုဆန့်ကျင်သောကမ္ဘာကြီးကိုခရီးနှင်ခဲ့သည့် Preace Boat သင်္ဘောတွင်ပြုလုပ်ခဲ့သောလုပ်ရပ်တွင်ထိုအနုပညာမှာလည်းခံစားနိုင်သည်။
အဲဒီမှာ "Colour of Peace" ၏ကန ဦး ကလေးများ၏ပန်းချီကားများကိုပြသခဲ့သည်။ La Hibakusha, Noriko Sakashita, "ဒီမနက်မှာဘဝ" ဆိုတဲ့ကဗျာတစ်ပုဒ်ကိုရွတ်ဆိုပြီး Miguel Lópezကတီးမှုတ်သည် dels Ocells” ကို Pau Casals မှထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်။ ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ကဆောင်းပါး၌မြင်နိုင်ပါသည် ငြိမ်းချမ်းရေးလှေမှ ICAN အဖွဲ့အစည်းများ.
En Sardinia၀ ါးသင်္ဘောသားများသည်“ ရွှေ့ပြောင်းအနုပညာ” ကွန်ယက်၏သူငယ်ချင်းများနှင့်ရောနှောခဲ့ပြီး“ ငါတို့ကပုံဆောင်သဘောအရကိုယ့်ကိုယ်ကိုပိုးသားချည်မျှင်နဲ့စည်းလုံးစေတဲ့စိတ်ခံစားမှုပါ ၀ င်မှုကွန်ယက်တစ်ခုထဲမှာတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်စည်းလုံးစေတယ်။ ”
နောက်ဆုံးတွင်မြေထဲပင်လယ်ငြိမ်းချမ်းရေးငြိမ်းချမ်းရေး၊ နိုဝင်ဘာလ 19 နှင့် 26 အကြား, ခရီးစဉ်၏နောက်ဆုံးခြေထောက်ပိတ်။
Livorno တွင်ခံတပ်အဟောင်းတွင်အစည်းအဝေးတစ်ခုကျင်းပသည် -
“ the ည့်သည်တွေထဲမှာငြိမ်းချမ်းရေးအသင်းအတွက်ဥက္ကဌအန်တိုနီယိုဂျန်နီလီလည်းပါဝင်တယ်၊ ဒီအဖွဲ့ကငြိမ်းချမ်းရေးစောင်အပိုင်းအစနဲ့အနုပညာပြပွဲ ၄၀ ရဲ့ဒီဇိုင်း ၄၀ ကိုပြသခဲ့ပြီးစုစုပေါင်း ၅၀၀၀ ကျော်ပါဝင်တယ်။ ငါတို့မြေထဲပင်လယ်ကိုရှောက်သွားလေ၏။
၁၉၄၄ ခုနှစ်တွင်နာဇီများအသတ်ခံရသူ ၃၅၇ ဦး၊ ၆၅ ယောက်မှာကလေးများနေထိုင်ခဲ့သည့် Sant'Anna di Stazzema မြို့တွင်အခြေစိုက်ထားသည့်သူ၏အသင်း၏အတွေ့အကြုံကိုအန်တိုနီယိုကပြန်ပြောပြသည်။
Fiumicello Villa Vicentina သည်အနုပညာလှုပ်ရှားမှုမီးမောင်းထိုးပြသည့်လှုပ်ရှားမှုများစွာကိုအားပေးအားမြှောက်ပြုခဲ့သည် -
သောကြာနေ့ 06.12 နေ့တွင် ဂီတပြပွဲ "Magicabula" ယဉ်ကျေးမှုအစည်းအရုံးက "Parc no? ... ခရစ်စမတ်၏မှော်အတတ်ကိုကျွန်ုပ်တို့တစ် ဦး စီတွင်ဝှက်ထား၏။
စနေနေ့ (၁၄.၂.၂၀၁၂) ရက် ၂၀း၃၀ တွင် Staranzano မှပြဇာတ်ရုံကုမ္ပဏီ Lucio Corbatto ကဖျော်ဖြေတင်ဆက်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် Achille Campanile ၏ထူးခြားသောလုပ်ရပ် Campanilismi နှင့်အတူပျော်စရာဖြစ်ခဲ့သည်။
Titas Michelas Band သည်ကမ္ဘာ့မတ်လကိုမြှင့်တင်သည် Epiphany ဖျော်ဖြေပွဲကာလအတွင်း
ဇန်နဝါရီလ ၆ ရက်နေ့တွင် Banda Tita Michelàsသည် Fiumicello Villa Vicentina ရှိလူထုအား ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင်ကောင်းမွန်သောဆန္ဒများပေးအပ်ရန်ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်။
Bison အခန်းရှိရုပ်ပြများ - ခရစ်စမတ်လှုပ်ရှားမှုများအတွင်း“ Serata omicidio” နှင့်“ Venerdì 17” ရုပ်ရှင်များကိုကိုယ်စားပြုသည်။
စနေနေ့၊ ဒီဇင်ဘာ ၂၁ ရက်နှင့်တနင်္ဂနွေနေ့၊ ဒီဇင်ဘာ ၂၂ ရက်၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ သော Philodramatic ကုမ္ပဏီပြဇာတ်ဖျော်ဖြေပွဲ
နောက်ဆုံး“ Fiumicello တွင်မျှဝေရန်လှပသောအချိန်” တွင် -
၂၀၁၂၊ ၂၂/၂၀၂၀ စနေနေ့ဒီစနေနေ့မှာကျွန်တော်တို့ဟာကင်းထောက် Fiumicello နဲ့အတူရှိနေပါတယ် ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်အကြမ်းမဖက်ရေးကိုရေး၊ ရေးဆွဲသည်.
၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ စနေနေ့ ၂၂/၂၀၁၀ နေ့လည်ခင်းတွင် Fiumicello 22 ကင်းထောက်များသည်သူတို့ပတ် ၀ န်းကျင်တွင်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးသူတို့ကငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်အကြမ်းမဖက်ခြင်းအကြောင်းပြောဆိုခဲ့ကြသည်။ ငါတို့အတူတူသီဆို
နှင့် Vicenza အတွက်, Rossi ရှိ "ဂီတနှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးစကား":
ဖေဖော်ဝါရီ ၇ ရက်၊ သောကြာနေ့တွင်ဖွဲ့စည်းထားသောအနုပညာရှင်များ Pino Costalunga နှင့် Leonardo Maria Frattini တို့၏ပူးပေါင်းမှုဖြင့် Vicenza မြှင့်တင်ရေးကော်မတီ Vicenza မှဖြတ်သန်းသွားသောငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်အကြမ်းမဖက်ရေးကမ္ဘာ့မတ်လမတိုင်မီရက်ပေါင်း ၂၀ ခန့်က နံနက် ၈:၃၀ နာရီ၊ “ Rossi” Institute (Legione Gallieno7မှတစ်ဆင့်) တွင်“ ဂီတနှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးစကား” ပြပွဲ။
ကံမကောင်းစွာဖြင့် COVID-19 ပေါ်ပေါက်လာခြင်းနှင့်ကူးစက်ရောဂါများကိုရပ်တန့်ရန်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းတို့ကြောင့်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မတ်လဖြတ်သန်းရန်စီစဉ်ထားသောလုပ်ဆောင်မှုများအားလုံးကိုဖျက်သိမ်းခဲ့ရသည်။
ဤလှုပ်ရှားမှုများသည်ယခုနှစ်နွေ ဦး ရာသီတွင်ဖြစ်မည်ဟုကတိက ၀ တ်ရှိသည်။
En အီကွေဒေါနိုင်ငံ, အနုပညာဖောင်ဒေးရှင်းနှင့်ကမ္ဘာမရှိစစ်ပွဲများနှင့်အကြမ်းဖက်မှုကင်းမဲ့သည့်အဖွဲ့သည်ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ်တင်ဆက်ရန်အားထုတ်ခဲ့သည် Guayaquil အနုပညာပြပွဲနှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်အကြမ်းမဖက်ခြင်း။ ဒီဇင်ဘာလ ၁၀ ရက် ၂၀၁၉ တွင်ဖွင့်လှစ်မည့်ဤအခမ်းအနားသို့နိုင်ငံသားနှင့်နိုင်ငံခြားသားများအကြားအနုပညာရှင် ၃၂ ဦး ပါ ၀ င်သည်
En ကိုလံဘီယာ, နိုဝင်ဘာလ4နှင့်9အကြား ပန်းပုအတော်များများကိုဖွင့်ပွဲတက်ခဲ့တယ်။
ထိုနေ့တွင်ပင် Universidad Bogotá Bogota ကိုလံဘီယာတွင်ပန်းပုကိုဖွင့်လှစ်လိုက်သည် ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်လွတ်လပ်ရေး Wings မာစတာအိန်ဂျယ် Bernal Esquivel ၏။
Universalist Humanist Movement ကိုတည်ထောင်ခဲ့သူ Mario Luis Rodríguez Cobos ကို Silo ၏ပြတိုက်တစ်ခုဖွင့်လှစ်လိုက်သည်။ ထိုလုပ်ရပ်တွင်ပန်းပုဆရာ Rafael de la Rubia၊ ကိုလံဘီယာရှိ MSGySV ကိုယ်စားလှယ်များနှင့်အာဏာပိုင်များက
En ပီရူးအတွင်းပိုင်း အနုပညာ - ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများ ဒီဇင်ဘာလ ၁၇ ရက်၊ Arequipa တွင်အနုပညာယဉ်ကျေးမှုပွဲတော်တစ်ခုကျင်းပခဲ့သည်။
ဒီဇင်ဘာလ ၁၉ ရက်နေ့တွင်လှုပ်ရှားမှုများဆက်လက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး Tacna တွင် Michalla နေရာတွင်အနုပညာနံပါတ်များနှင့်အတူဒုတိယကမ္ဘာစစ်၏ Base Team ကို reception ည့်ခံခဲ့သည်။
သင်ဖြတ်သန်းသကဲ့သို့ အာဂျင်တီးနား, အခြေစိုက်အဖွဲ့, Punta de Vacas ၏သမိုင်းလေ့လာမှုနှင့်ရောင်ပြန်ဟပ်မှုပန်းခြံ၌တည်၏, အနီးအနားရှိမြို့ကနေ choir အားဖြင့်လက်ခံရရှိခဲ့သည်။ အကောင်းဆုံးရည်ရွယ်ချက်များနှင့်ပြည့်နေသောပျော်ရွှင်ဖွယ်သီချင်း။
လှပသော“ နံရံ” ဖွင့်ပွဲသို့လည်းကျွန်ုပ်တို့ပါ ၀ င်ခဲ့သည်။ ရာဖေးလ်နှင့်လီတာတို့က La Plata Community မှသူငယ်ချင်းအချို့၏ Mural ကိုတင်ဆက်ခဲ့သည်။
ရာဖေးလ် la la ရူဘီယာကကိုလံဘီယာတွင်ကဲ့သို့စီလိုလိုနှင့်ဆီလိုလိုစသည်တို့ကိုဖွင့်လှစ်ခဲ့သည့်ပလာဇာကဲ့သို့အခြား“ နိမိတ်လက္ခဏာများ” များလည်းရှိခဲ့သည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။
En ချီလီ, ကုန်သည်တွေပါဝင်ခဲ့ ဘာဝနာ, ချီတက်ပွဲနှင့်ရွှင်လန်းပါတီ:
အဆိုပါပါတီ, ဝမ်းမြောက်သောစိတ်၏ပြပွဲတိုင်းပြောဆိုချက်ကိုရမည်ဖြစ်သည်သောစိတ်ဝိညာဉ်ကိုပြသရန်ရည်ရွယ်, အကြမ်းမဖက်ခြင်းနှင့်အနာဂတ်ရှင်းလင်းရေး၏ဝမ်းမြောက်သောစိတ်။
အခြားအလှုပ်ရှားမှုများအစုများအနက်, အာရှရှိ အိႏၵိယအစောပိုင်းကာလများတွင်ကုန်သည်တွေ သူတို့သည်လှပသောအကများကိုဆင်ခြင်သုံးသပ်ခဲ့ကြသည်.
ဥရောပအတွက်, Bel Canto
၂၀၂၀၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၇ ရက်တွင် Rognac တွင် ATLAS အသင်းမှ“ အနုပညာခုခံရေးပြပွဲ” ကိုပြသခဲ့သည်။ငါတို့ကအခမဲ့ဖြစ်သည်” ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်အကြမ်းမဖက်ရေးအတွက်ကမ္ဘာ့ဖလားမတ်လ (၂) ရက်နေ့အတွင်း။
ပြီးတော့ Augbagne မှာသူတို့က“လူတိုင်းအတွက်သီချင်းဆို"။
၂၀၂၀၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၈ ရက်သောကြာနေ့တွင်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်နှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်အကြမ်းမဖက်ရေးလှုပ်ရှားမှုမူဘောင်တွင် Aubagne တွင်လူအားလုံးဖွင့်လှစ်ထားသောလွတ်လပ်သောသံသယတေးသံကိုကျင်းပခဲ့သည်။
ဤဖြစ်ရပ်ကို EnVies EnJeux အသင်းမှစီစဉ်ခဲ့သည်။
Aubagne ရှိလူတိုင်းအတွက်ကျွန်ုပ်သီဆိုသည်။ https://theworldmarch.org/canto-para-todos-y-todas-en-aubagne/
မတ်လ ၈ ရက်နေ့တွင်ဒုတိယမြောက်ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်အကြမ်းမဖက်ခြင်းအတွက်အမှတ်တံဆိပ်အားမက်ဒရစ်တွင်အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။
မတ်လ ၇ ရက်မှ ၈ ရက်အကြားဆောင်ရွက်ချက်များ မက်ဒရစ်အတွက်မတ်လပိတ်သိမ်း.
နံနက်ယံ၌ 7th တွင် ယဉ်ကျေးမှုစင်တာ အဆိုပါ Vallecas ရပ်ကွက်အတွင်းအတွက် del Pozo,atwinning ဖျော်ဖြေပွဲ အဆိုပါအကြား Núñez de Arenas ကျောင်းPequeñas Huellas သံစုံတီးဝိုင်း (တူရင်) နှင့် Manises ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ Athenaeum (Valencia)၊ ယောက်ျားနှင့်မိန်းမပေါင်းတစ်ရာတို့သည်အမျိုးမျိုးသောဂီတအပိုင်းများနှင့်အချို့သောရက်ပ်သီချင်းများကိုသီဆိုခဲ့ကြသည်။
ပြီးတော့ ၈ ရက်မနက်မှာနောက်ဆုံးအကြမ်းဖက်မှုမှာလူ့အကြမ်းမဖက်ရေးသင်္ကေတကိုကိုယ်စားပြုပြီးသူကကခုန်ခြင်းနှင့်ရိုးရာဓလေ့သီဆိုခြင်းများကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်လုပ်ခွင့်ပေးခဲ့တယ်။ ထိုနေရာတွင်အမျိုးသမီးများလွတ်မြောက်ရေးအတွက်နက်ရှိုင်းသောသီချင်းတစ်ပုဒ်တွင် Marian Galan (ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းလျှောက်နေသောအမျိုးသမီးများ) ၏အသံဖြင့်မွေးဖွားခဲ့သည်။ Mother Earth ကိုပြုစုစောင့်ရှောက်သူများအဖြစ်အမျိုးသမီးများထံမှအသနားခံခြင်း။
အီကွေဒေါလူမျိုးတို့၏ရိုးရာအစဉ်အလာကိုလည်းတွေ့ခဲ့ရပြီးကျွန်ုပ်တို့၏တောင်တန်းများ၏ ၀ တ်စုံ ၀ တ်စုံများ ၀ တ်ဆင်ထားသည်။ လက်သင်္ကေတပါသောအကသမားများက“ ငြိမ်းချမ်းရေးကိုတည်ဆောက်ပါ၊ အကြမ်းဖက်မှုမဟုတ်ပါ”
နောက်ဆုံး…အီတလီ၏ Colours for Peace အစည်းအရုံး၏ကျေးဇူးကြောင့်ပြိုင်ပွဲ ၀ င်များသည်ကမ္ဘာတဝှမ်းရှိကလေးများပြုလုပ်သောပန်းချီကား ၁၂၀ ပြပွဲသို့တက်ရောက်ရန်ဖိတ်ကြားခံခဲ့ရသည်။